Akụkọ - Huyssen N'èzí Otu Ụlọ-Ọrụ Rafting
Nnyefe ọkụ na-agbanwe
Mmepụta ndị ọzọ
DIN Rail ike ọkọnọ
DIN okporo ígwè 5V
DIN okporo ígwè 12V
DIN okporo ígwè 15V
DIN okporo ígwè 24V
DIN okporo ígwè 36V
DIN okporo ígwè 48V
Nbunye ike DC nwere ike idozi
Nnweta ike nrụpụta ọtụtụ
Usoro Mmepụta Abụọ
Usoro mmepụta Quad
Usoro mmepụta atọ
Ntinye ike dị mkpa
SPS 5V dị obere
SPS dị obere 12V
SPS dị obere 15V
SPS dị obere 24V
SPS dị obere 36V
SPS dị obere 48V
Ihe nkwụnye ngbanwe
Ihe nkwụnye ọkụ
Ihe nkwụnye ọkụ na Desktọpụ
Ihe nkwụnye ọkụ nwere mgbidi
Ihe ngbanwe kwalite
Ihe ntụgharị ego
Nkwanye ike na-egbochi mmiri
Nnyenye ike dị ugbu a
Nnyenye ike voltaji mgbe niile
Nkwanye ike DALI
Ọdụ ọkụ enwere ike ibugharị
Ụlọ otu egwuregwu dị n'èzí Huyssen – Ihe omume Rafting
Iji dozie nrụgide ọrụ, mepụta agụụ, ọrụ, na obi ụtọ na-arụ ọrụ ikuku, na-eme ka ndụ omenala ndị ọrụ na-amu amu, melite ọdịmma ụlọ ọrụ, na ịbawanye nkwurịta okwu na mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ, Huyssen Power haziri otu n'èzí otu rafting otu ụlọ ọrụ ụnyaahụ.
Isiokwu nke mmemme a bụ "Izute ihe ịma aka ọhụrụ, ịmepụta ihe ọhụrụ", njem ụgbọ mmiri na njem otu ụbọchị na Huangteng Gorge, Qingyuan. Ebumnuche nke ọrụ a bụ ịzụlite mmụọ otu nke ndị ọrụ site na ọrụ rafting otu a, kwalite njikọta nke ndị ọrụ, na ịkwalite nghọta na mmekọrịta n'etiti ngalaba dị iche iche na ndị ọrụ.
Na-ebugharị loops mmiri na-emegharị emegharị, mmiri ahụ doro anya, dị jụụ ma na-enye ume ọhụrụ, na egwurugwu na-ekokwasịkarị. Ka anyị na-aga, anyị nwekwara ike na-ekiri ọnụ ọnụ okwute dị iche iche, ọmarịcha mmiri mmiri, na ebili mmiri na-acha anụnụ anụnụ. Anyị ka bụ ihe na-adịghị agwụ agwụ, nwere ihe ụtọ na-adịghị agwụ agwụ.
Site n'ọrụ ụlọ otu a, onye ọ bụla mere ka ọ matakwuo ọdịdị ala na ihe gbasara mmadụ n'oge egwuregwu ahụ. Ụlọ otu ndị na-agbagharị agbagharị na-ekpo ọkụ mekwara ka mmụọ mkpokọta na nlebara anya otu onye ọ bụla sikwuo ike, ịdị n'otu na ike centripetal nke ụlọ ọrụ ahụ, ma kwalite ọbụbụenyi mara mma n'etiti ndị ọrụ ibe. Na mmetụta mmetụta uche na-ekele ụlọ ọrụ ahụ maka ọrụ rafting nke Huyssen Power zubere, ma nwee olileanya na ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu "iguzo na mmalite ọhụrụ, izute ihe ịma aka ọhụrụ, mepụta nsonaazụ ọhụrụ, ma mee ka ọkụ eletrik dịkwuo mma".
Oge nzipu: Jul-19-2021
Ụlọ E, Songyuan Technopolis, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Nkwanye ike Dc, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, Nweta ike ahaziri ahazi, Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip, Nnweta ike mmemme, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ,